Sidee Loo Xaliyaa Dhibaatooyinkeyga Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 577
Iyada oo la Xarunta Caawinta Twitter.
Isticmaaluhu wuu xallin karaa dhibaatooyinka arrimaha guud ee isticmaalka: Ogeysiisyada, sawirrada iyo fiidiyowyada, su'aalaha la xiriira Faafaahintiisa, Khiyaanada aqoonsiga, xadgudub ama dhibaateyn, phishing ama spam iyo waxyaabo xasaasi ah.
Isticmaalaha waxaa lagu wargelinayaa Xarunta Caawinta ee Twitter-kiisa Xeerarka iyo Xeerarka Adeegsiga shabakadda bulshada; Tani waxay kugu hagi doontaa markaad daabacaado, kaqeybqaadashada wadahadallada, Fariimaha, si aadan u sameyn nooc kasta oo xadgudub ah iyo jebin xeerarka.
Muuqaalka cusub ee Talo Jar Jar ah
Twitter ayaa ka warbixisay mid cusub shaqada loo yaqaan Talo Jar, Isbaanishka macnaheedu waa weel talooyin ah; taas oo u fududeyn doonta Isticmaalaha inuu kuwa kale ku bixiyo indha qabashada, kicinta, aragtida iyo dhiirigelinta Tweet.
Sida laga soo xigtay Twitter, Isticmaaluhu wuu ogyahay in a Koontada ayaa loo kartiray Talooyinka Jar markii aad aragto astaamaha Talo Jar oo ku xigta badhanka Raac ee boggaaga Profile. Si aad u bixiso, waa inaad gujisaa astaanta oo menu-bixinnada lacag-bixinta ee uu Isticmaaluhu karti u muuqan doono.
Marka xigta, dooro adeegga lacag-bixinta ee aad doorbidayso oo waxay noqon doontaa laga soo wareejiyay Twitter barta aad ku tusi karto taageeradaada inta aad dooratay. Talooyinka Jar waxaa ku jira adeegyo ay ka mid yihiin: PayPal, Venmo, Patreon, Cash App iyo Bandcamp.
MAXAA LOOGU SAMEEYAY TAGAALKA XIGASHADA DULQAADKA?
Doorka Font Tags del Tweet waa inay ka caawiso Isticmaalaha inuu si fiican u fahmo sida loo daabacay Tweet. Calaamadaha noocan oo kale ah, waxay ku darayaan macno dheeri ah Tweet iyo qoraaga, iyagoo fududeynaya tarjumaad wanaagsan iyo fahamka ujeedkeeda.
Haddii Isticmaaluhu aanu aqoon meesha laga soo xigtay, waxay u baahan tahay hel macluumaad dheeraad ah oo go'aan ka gaadho haddii nuxurka uu yahay mid lagu kalsoonaan karo; Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay: Guji Tweet si aad u tagto bogga faahfaahinta; Qeybta hoose ee Tweet-ka waa isha isha, tusaale ahaan: Twitter-ka Android.
Barta Twitter ee xayeysiiyaasha ee Tweets waxay muujineysaa in Tweets la abuuray iyadoo la adeegsanayo Abuuraha Xayeysiiska Twitter. Xaaladaha qaarkood, Isticmaaluhu wuxuu fiirin karaa in qaar ka mid ah Tweets ay ka yimaadeen codsi aan ahayn Twitter.
Sheeg sheekadaada gaarka ah ee Twitter
Haddii Isticmaaluhu rabo ka sheekee sheekadaada, Twitter waxay bixisaa shaqooyinkan: Abuur xargaha Tweets iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro saameynta ugu weyn, ka hel bulshadaada mawduucyo iyo liisasyo, abaabul oo gacan ka geysii fidinta erayga hashtag.
Intaas waxaa sii dheer, Isticmaaluhu waa inuu had iyo jeer wadaag iyadoo bulshadaada ay isticmaaleyso Retweets oo faallo ka bixisay ama aan ku dhajin, sawirro iyo fiidiyowyo u soo raac kuwa raacsan iyo bulshadaada si aad u siiso taabasho shaqsiyeed.
Isticmaaluhu wuxuu ubaahanyahay wadaagida waxa hada socda daqiiqado nool; oo habeey Macluumaadkaaga, halkan taariikh-nololeedka waa in had iyo jeer la cusbooneysiiyaa oo farriintaadii ugu dambaysay lagu dhajiyaa xagga sare.
1 Muuqaalka cusub ee Talo Jar Jar ah
2 MAXAA LOOGU SAMEEYAY TAGAALKA XIGASHADA DULQAADKA?
3 Sheeg sheekadaada gaarka ah ee Twitter